कसरि पड्किन्छ ग्यास थाहा छ ? तपाइंको भान्सामा भएको ग्यास सिलिन्डर कस्तो छ ? « News24 : Premium News Channel
६ असार २०७३, सोमबार
कसरि पड्किन्छ ग्यास थाहा छ ? तपाइंको भान्सामा भएको ग्यास सिलिन्डर कस्तो छ ?
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले १२ फागुनमा धादिङमा एचपी र सुगम ग्यासको निरीक्षण गर्दा सिलिन्डरको हाइड्रोलिक र हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण नगरेको भेटिएको थियो । तर, अयोग्य सिलिन्डर नै भरिएर बजार पुगेकाले दुर्घटना भएका छन् । ७ जेठमा पाटनमा एचपीको सिलिन्डर पड्किएर तीनजनाको ज्यान गयो । ३१ वैशाखमा कालिमाटीमा सुगमको सिलिन्डर पड्केर एकको मृत्यु भयो ।